Qatar Airways na-arụ ọrụ nke mbụ ụgbọ elu COVID-19 zuru oke n'ụwa
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Qatar Airways na-arụ ọrụ nke mbụ ụgbọ elu COVID-19 zuru oke n'ụwa
Q6421 ga-arụ ọrụ site na A350-1000, ọ ga-ebu naanị ndị ọrụ ọgwụ mgbochi na ndị njem nọ n'ụgbọ ahụ
Flightgbọ elu pụrụ iche ga-egosipụta usoro niile ụgbọ elu ahụ setịpụrụ
Ndị ọrụ QR6421 ga-arụ ọrụ ndị ọrụ mgbochi zuru oke na ntinye
Ndị njem nọ n'ụgbọ ga-enwe ike ibi ndụ akụkọ ihe mere eme
Qatar Airways na-aga n'ihu na-eduga na mgbake nke njem mba ụwa, na-arụ ọrụ ụgbọ elu mbụ nke COVID-19 zuru oke taa. QR6421 ga-apụ Ọdụ ụgbọ elu mba Hamad n'elekere 11:00 nke ụtụtụ na-ebu naanị ndị ọrụ ụgbọ mmiri na ndị njem nọ n'ụgbọ ahụ, ya na ndị njem ga-arụkwa ọrụ nke ndị ọrụ mgbochi zuru oke na ntinye. Flightgbọ elu pụrụ iche, nke ga-alaghachi Doha na 14: 00, ga-egosipụta usoro niile ụgbọ elu ahụ setịpụrụ iji hụ na nchekwa nchekwa na ịdị ọcha kachasị elu, gụnyere ọhụụ ọhụrụ ya, nke mbụ 'Zero-Touch' ụwa. na-elu ụgbọ elu na nkà na ụzụ. Ọrụ ụgbọ elu ahụ kachasị na teknụzụ na-adigide, Airbus A350-1000 ga-arụ ọrụ pụrụ iche, yana ụgbọ elu ahụ na-ebutu carbon kpamkpam n'ụzọ kwekọrọ na ibu ọrụ gburugburu ebe obibi nke ụgbọelu ahụ.
Qatar Airways Group Chief Executive, Onye ukwu Mazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “flightgbọ elu pụrụ iche nke taa na-egosi ọkwa ọzọ na mgbake nke njem mba ụwa adịghị anya. Obi dị anyị ụtọ ịnọgide na-eduga ụlọ ọrụ ahụ site na iji ụgbọ elu nke mbụ ya na ndị ọrụ ya na ndị njem zuru oke na-enye ọgwụ mgbochi na-enye ọkụ nke olileanya maka ọdịnihu nke ụgbọ elu mba ụwa. Site na ụgbọ elu ịbụ onye ọkwọ ụgbọ akụ na ụba dị egwu n'ụwa niile na ebe a na Qatar, anyị nwere ekele maka nkwado anyị natara n'aka gọọmentị anyị na ndị isi ahụike obodo iji gbaa ndị ọrụ anyị ọgwụ, ebe a na-enye ọgwụ mgbochi 1,000 kwa ụbọchị.
Ndị njem nọ n'ụgbọ ga-enwe ike ibi ndụ ahụmịhe akụkọ ihe mere eme site na ụlọ ọrụ Qatar Airways na-eduga Super WiFi onboard nke jikọtara teknụzụ kachasị ọhụrụ site na Inmarsat, SITA maka ụgbọ elu na Thales.
Iji gosipụta ekele ya nye ndị rụrụ ọrụ dị mkpa n'oge niile ọrịa ahụ na-efe efe, Qatar Airways nyere ndị ọrụ nlekọta ahụike na tiketi nnabata ihe ruru 100,000 na ndị nkuzi gburugburu ụwa na 21,000.
Viking maliteghachitere arụmọrụ pere mpe na ụgbọ mmiri Bermuda, Iceland na UK
Kedu ebe a na-achọkarị ezumike ezumike na US?